Banaanbax ka dhacay Qardho iyo xaafadaha Boosaaso oo ciidan lagu daadiyay
Qardho:-Wararka naga soo gaaraya magaalada Qardho ee xarunta gobalka Karkaar ayaa sheegaya in banaanbax ka dhan ah xukuumada Madaxweyne C/raxmaan Faroole uu ka dhacay magaalada Qardho waxaana uu Banaanbaxa ahaa mid si nabad ah ku dhacay .
Ciidamada amaanka iyo Maamulka Degmada Qardho ayaa kor kala socdaya Banaanbaxa ka dhacay maanta magaalada Qardho ilaa haatana ma jiraan wax iska horimaad ah oo dhexmaray ciidanka amaanka ee Qardho iyo dadweynaha Banaanbaxa dhigayey
Dhanka kale magaalada Boosaaso ee xarunta gobalka Bari ayaa saaka waxay ku waabariisatay ciidamo aad u tiro badan kuwaas oo ku gaashaaman Gawaarida Tiknikada ah waxaana ay gaafwareegayaan xaafadaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobalka Bari.
Ciidamda Daraawiishta Puntland iyo kuwa Badda ayaa la soo dhoobay jidadka magaalada Bosaaso sida waddada tagta Madaxtooyada, Isgoyska Gaaca, iyo waddooyinka xaafadda Laanta Hawada iyo Xaafadda qadiimka ah ee Xaafad Carab waxaana ay baarayaan Gawaarida u kala goosheysa xaafadaha magaalada Boosaaso.
Mucaaradka xukuumada Madaxweyne Faroole ayaa ku doodaya in wakhtiga dowladiisa ay ku egtahay maanta iyaga oo ugu baaqay in uu qabto doorasho waxayna xaaraan ku tilmaameen halka sano ay dowlada Madaxweyne Faroole ku darsatay.
Dhanka kale Xukuumada Madaxweyne Faroole ayaa ku doodaysa in halka sano uu yahay mid sharci ah ayna ansaxiyeen baarlamaanka Puntland iyo 480 ergooyin oo ka kala yimid gobalada Puntland waxaana goobjoog ka ahaa madashaas Isimada ugu waaweyn deegaanada Puntland.